I-Avidemux 2.7.6 sele ikhutshiwe, yazi olona tshintsho lubalulekileyo | Ubunlog
Ubumnyama | | isiNxulumanisi, software
Inguqulelo entsha sele ikhutshiwe ukusuka kumhleli wevidiyo Avidemux 2.7.6 kwaye kolu luhlobo lutsha kutshintsho olunomdla olunikiweyo kwaye ngazo Umzekelo, ukudityaniswa kwekhowudi ye-AV1 kuyabonakala, uhlaziyo lwe-ffmpeg, ukulungiswa kwee-mp3s, kunye nokunye.
Kulabo abangazi AviDemux, kufuneka bayazi loo nto ngumhleli wevidiyo kunye nesiguquli sevidiyo enokusetyenziselwa ukwenza kunye nokuhlela iividiyo, kunye nokuguqula iifayile zevidiyo ukusuka kwifomathi enye ukuya kwenye. Ingasebenza nazo zonke iifomati zevidiyo ezaziwa kakhulu, kubandakanya i-AVI, iDVD MPEG, MP4 kunye neefayile ezihambelanayo.
NgeAvidemux, unokwenza ukusika okusisiseko, ukukopa, ukuncamathisela, ukucima, ukuphinda wenze ubungakanani kwakhona, ukwahlula ifayile kwiindawo ezininzi, njl. Kukho zonke iintlobo zeefilitha zomfanekiso kunye nesandi (ukuphinda wenze ubungakanani kwakhona, ukutshintsha indawo, i-IVTC, ukukhulisa, ukususa ingxolo, kunye nezinye).
1 Ezona mpawu ziphambili zeAvidemux 2.7.6
1.1 Uyifaka njani iAvidemux kwi-Ubuntu nakwiziphumo?
Ezona mpawu ziphambili zeAvidemux 2.7.6
Kule nguqulo intsha ikhutshiweyo yesoftware kwenziwa iikhowudi ezintsha kunye neekhowudi, apho idikhowuda ibonakala Yongezwe i-AV1 esekwe kwi-libaom kunye nekhowudi VP9 libvpx esekwe ngokudibeneyo.
Entsha Inkxaso yeVorbis kwi-MP4 multiplexer, iiprofayile ezintsha ze-HE-AAC kunye ne-HE-AACv2 kwi-FDK-AAC encoder.
Kanye kunye Inkxaso yeethrekhi zangaphandle zomsindo kwifomathi ye-DTS, Ukuphuculwa kokuphathwa ngokulandelelana kwevidiyo.
Kwaye Ukulungiswa kweethoni zomsindo zeMP3 MP4 kwiifayile zeMPXNUMX ichongwe ngempazamo njenge stereo kunye nokuphuculwa kwemijelo yevidiyo ye-H.264 apho kutshintshwa iiparameter zokufaka ikhowudi kubhabho.
Ngokumalunga nezilungiso, inzame yokuphelisa ukungazinzi kwezitampu zexesha kwiifayile ze-MP4 ezenziwe ziinguqulelo zangaphambili zeAvidemux ziyabonakala.
Yongeze i-deinterlacer ngomsebenzi wokuphinda wenze ubungakanani kwakhona usebenzisa i-VA-API isiseko sokukhawulezisa izixhobo (kwiLinux kuphela).
I-FFmpeg ihlaziyiwe kuhlobo lwe-4.2.3.
Esona sisombululo siphezulu sixhaswayo sonyuswe saya kwi-4096 × 4096.
Isilumkiso siyaboniswa ukuba amanqaku okusika kwi-H.264 kunye ne-HEVC yemijelo yevidiyo kunokubangela ezinye iingxaki ekudlaleni, nokuba zikwiifayile eziphambili.
Yongezwe inkxaso yeefayile ze-TS ezindala kune-13: 15: 36.
Endaweni yokucima umzila, isiseko se-DTS sefomathi ye-DTS-HD MA ngoku sisetyenziswa kwiifayile ze-TS.
Ukujikeleza okungaguqukiyo kwamaxesha okubamba, okukhokelela kumbumbulu we-VFR encoding (ngenqanaba lesakhelo esiguqukayo), nokuba umthombo nguCFR.
Ixhasa i-LPCM yeaudio kwi-MP4 multiplexer ethe cwaka itshintshela kwimowudi ye-MOV yokuphindaphindeka.
Gqibela ukuba unomdla wokwazi okungakumbi ngayo malunga nale nguqulo ikhutshiweyo, unokujonga iinkcukacha ngokuya kule khonkco ilandelayo.
Uyifaka njani iAvidemux kwi-Ubuntu nakwiziphumo?
Uninzi lwenu luya kuyazi loo nto I-Avidemux ingaphakathi koovimba ukusuka Ubuntu, kodwa ngelishwa abayihlaziyi ngokukhawuleza.
Kungenxa yoko le nto ukuba ufuna ukufaka le nguqulo intsha ngoku!. Kufuneka wongeze indawo yokugcina kwinkqubo yakho:
Ngaphandle kokunye, konke oko kukonwabela uhlaziyo olutsha.
Kuyenzeka ukuba ube nakho faka usetyenziso kwiAppImage. Okokuqala masikhuphele usetyenziso kunye:
Yenza le nto Siyaqhubeka ukunika imvume yokwenza iifayile nge:
Kuya kufuneka usebenze usetyenziso kwifayile yeAppImage oyikhuphelileyo ngokuchofoza kabini kuyo okanye kwi-terminal nge:
Xa usenza le fayile yeAppImage, siya kucelwa ukuba sifuna ukudibanisa isindululi kwimenyu yethu yesicelo, kungenjalo siphendula kuphela ngohayi.
Ngoku ngokulula ukuqhuba usetyenziso kufuneka sijonge isiqalisi kwimenyu yethu yesicelo, ukuba awukhethanga.
Okokugqibela enye indlela ekufuneka sifake ngayo le nguqulo intsha yeAvidemux kwinkqubo yethu ngoncedo lweephakeji zePlppak. Sifuna kuphela ukuxhaswa kolu hlobo lwepakeji.
Ukufakwa kunokwenziwa ngokwenza lo mthetho ulandelayo kwisiphelo sendlela:
Kwaye nge-voila, ungaqala ukusebenzisa usetyenziso kwinkqubo yakho.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ubunlog » software » I-Avidemux 2.7.6 sele ikhutshiwe, yazi olona tshintsho lubalulekileyo
UMaria Julia Martinez sitsho
Ndifuna ukuqala ukuyisebenzisa kodwa andazi ukuba ndiyisebenzisa njani, andikaze ndisebenzise umhleli wevidiyo
Phendula uMaria Julia Martinez
UJuan Angel sitsho
Imenyu ayiveli (linux, xcfe). Ziimpawu ezintathu kuphela (vula, gcina kunye nolwazi)
Phendula uJuan Ángel
Usebenza njani ngePDF